ओम्याक्स हलमा के कारणले भयो आगलागी ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV ओम्याक्स हलमा के कारणले भयो आगलागी ? | Sagarmatha TV
काठमाडौं । हेटौंडास्थित ओम्याक्स हलमा आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति भएको छ ।नरेन्द्र महर्जनले हेटौंडा–४, हुप्राचौरमा सञ्चालन गरेको फिल्म हलमा बुधवार बिहान करिब १० बजे आगलागी भएको हो ।
हेटौंडा उपमहानगर र आयल निगम अम्लेखगञ्जका दुई दमकलको सहयोगमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको प्रयासमा हलमा आगो लागेको करिब साढे २ घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरका अनुसार, विद्युत सर्ट भएर ओम्याक्स हलमा आगो लागेको हो । आगलागीबाट मानविय क्षती नभएपनि करोडौंको क्षति भएको छ । हलमा रहेका भौतिक संरचना लजेर नष्ट भएका छन् ।
दुईतले भुवनमा रहेको फिल्म हलको सबै भागमा आगो फैलिएको थियो । ०६५ सालमा ३ डी प्रविधि प्रयोग गरेर करिब ४ करोड लगानी उक्त हल निर्माण भएको थियो । यस हलमा अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह स्टारर फिल्म ‘कायरा’ प्रदर्शनरत थियो । उक्त हलका सञ्चालक महर्जन ‘लुट’, ‘संरक्षण’ लगायतका फिल्मका निर्माता तथा एफडी कम्पनीका अध्यक्ष समेत हुन् । त्यस्तै उनी चलचित्र पदर्शक सदस्य एवं नेपाल चलचित्र संघका तृतीय उपाध्यक्ष समेत हुन् ।
यसैबीच, नेपाल चलचित्र संघ हलमा आगलागीको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै एक विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ । संघले आगलागीबाट करोडौंको क्षति भएकोमा दुुःख प्रकट गरेको छ । त्यस्तै चलचित्र घर पूर्ववत रुपमा पुनः शीघ्र सञ्चालनमा आउने आशा एवं विश्वास समेत लिएको छ ।